Posted by Wai Lin Aung at 6:24 AM
မြို့ ပြလမ်း လာရာ
ဖတ်ကြည့်ပါလို့နိုးဆော်ပါ၏ ကို ဧည့်သည်
Posted by Wai Lin Aung at 9:42 PM
အဖိနှိပ်ခံတို့ အသံ: စွမ်းသူများ လှူကြပါ
ဖုန်းက နိမ့်နေပြီ။ ဆိုရလျှင်ခေတ်မမီတော့ ချေ။ ထိုကြောင့် အင်တာနက်ကို အချိန်မှန် မသုံးနိုင်။ ဘေကလည်းဖြတ်လွန်းလှသည်။ ဝင်ငွေမရှိရတဲ့ အထဲ အိမ်ဆောက်ရန်အကြောင်းဖြစ်လာသည် မတတ်နိုင်ချေ။ ဖြစ်သမျှ ရင်ဆိုင်ရပေမည်။ မဖြစ်မနေ ဖုန်းဘေ ကုန်ရတော့မည် ။ ယခုလည်းပြည်သူအားလုံး၏ ဘဝက ရေထဲမှာ။ စွမ်းနိုင်သူတို့လှူ ကြ၏။ ဝမ်းမြောက်ရလေသည်။ အိမ်ထဲမှ ခြေတလှမ်းမှ ခွာ၍ မရသော မိမိအဖြစ် က။ လက်သမား ပန်ရံ သံချည် ကျောက်လောင်း ။ နေ့စဉ်ရင်ဆိုင်နေရသည်။ ဘာမှမတတ်နိုင်သော်လည်း တတ်နိုင်သလောက် ဆောင်ရွက်ရ ပေမည်။ i Save Myanmar ကယ်တင်ပေးပါ နိင်ငံတကာမှ ပြည်မြန်မာအား ဒုက္ခကြားက များလူသောင်းသောင်း အပေါင်းဝေနေယျ မျည်ရည်ဝေ ကြ သည်ကာလ ကိုနိင်း
Posted by Wai Lin Aung at 4:31 PM
Posted by Wai Lin Aung at 3:11 PM
Posted by Wai Lin Aung at 6:28 AM
အဖိနှိပ်ခံတို့ အသံ: အုတ်တစ်ချပ် သဲတစ်ပွင့်
Posted by Wai Lin Aung at 10:44 AM
Posted by Wai Lin Aung at 10:32 AM
Posted by Wai Lin Aung at 10:23 AM
Posted by Wai Lin Aung at 2:59 AM
Posted by Wai Lin Aung at 5:19 PM
အဖိနှိပ်ခံတို့ အသံ: နိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ရေး
Posted by Wai Lin Aung at 4:14 AM
Shan News: မွန်နဲ့ ကရင်ပြည်နယ်က လုပ်ငန်းရှင်များအဖွဲ့နှင့် တ...
Shan News: မွန်နဲ့ ကရင်ပြည်နယ်က လုပ်ငန်းရှင်များအဖွဲ့နှင့် တ...: မြန်မာနိုင်ငံ မွန်ပြည်နယ်နဲ့ ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းက လုပ်ငန်းရှင်များပါတဲ့ ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့နဲ့ တပ်ခရိုင် ကုန်သည်ကြီးများအသင်းတွေ့ဆုံပွဲကို အော...
Posted by Wai Lin Aung at 8:52 PM
EX - ABSDF: ဘမောင်၏ ငိုချင်းရှည်: Brainwave ဥာဏ်လှိုင်း အစိုးရရဲ့ ကြွေးယူမှုတွေ များပြားလာမှုကြောင့် မြန်မာပြည်သူတဦးမှာ ကျပ်လေးသိန်းကျော် ကြွေးတင်နေတယ်ဆိုတာ သိရပါတယ်၊...
Posted by Wai Lin Aung at 5:48 PM
Posted by Wai Lin Aung at 6:13 AM
အဖိနှိပ်ခံတို့ အသံ: Making money
Posted by Wai Lin Aung at 12:13 AM
Posted by Wai Lin Aung at 11:22 PM
အဖိနှိပ်ခံတို့ အသံ: ဗီယက်နမ်ကမ်းလွန်ပိုင်း လောင်စာဆီကွက် ပျောက်ဆုံးလေယာဉ်နဲ့ မပတ်သက်
Posted by Wai Lin Aung at 4:34 AM
Can we get virtual currency?: သန်းခေါင်စာရင်းသည် “ခိုးဝင်”တွေကိုခ၀ါချပေးခြင်း (E... : သန်းခေါင်စာရင်းသည် “ခိုးဝင်”တွေကိုခ၀ါချပေးခြင်း (Ethni...
မိုးမခ မီဒီယာ - MoeMaKa News & Media: Kamarpale - Poem : ဝေဒနာ ... လောဂျစ် ကမာပုလဲ မတ်လ ၃၀၊ ၂၀၁၃ စာမတတ်ခဲ့ဘူး လက်ပန်တောင...
ကောင်းပါတယ် ယဉ်ယဉ်လေးနဲ့ ရင်လေးသွား အနိုင်ယူလို့ မရ အရူံးပေးလို့မရ တိုက်...
မဟာဗလာ အကျ ကွက် နဲ့ အကွက် ကျ ကျ အကြောင်းပြ ချက် -ဆင်ခြင်- အယူခံခွင့် မှားယွင်းမူက စံနစ်တကျ ဘာမှမဟုတ်တာ ကို ရေးကြီးခွင်ကျ ယ် ဘာမှမ...
Can we get virtual currency?: သန်းခေါင်စာရင်းသည် “ခိုးဝင်”တွေကိုခ၀ါချပေးခြင်း (E...